सुरक्षित प्रणाली आवेदन हटाउन "एन्ड्रोइड"
एन्ड्रोइड-उपकरणहरू को सबैभन्दा मालिक स्मार्टफोन वा ट्याबलेटमा, तपाईं सुरुमा पूर्व-स्थापित अनुप्रयोगहरूको फारम अनावश्यक जंक को एक गुच्छा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर थाह छ। समीक्षा द्वारा न्याय, तिनीहरूलाई मात्र अधिकांश साधारण मालिक आवश्यक छैन, तर पनि यस्तो कार्यक्रम निरन्तर आफ्नो ज्ञान बिना अद्यावधिक र आन्तरिक भण्डारण वा स्मृति प्रयोगमा ठाउँ लाग्न छन् भन्ने तथ्यलाई एक बरु गम्भीर indignation गराउँछ। सिस्टम आवेदन हटाउन "एन्ड्रोइड" कसरी बनाउने, अब छ र देखाइनेछ। र यो जरूरी छैन मूल, वा उच्च प्रयोगकर्ता। तर पहिलो कुरा पहिले।
सिस्टम आवेदन कसरी महत्त्वपूर्ण छन्?
धेरै मानिसहरू सबै निर्मित एन्ड्रोइड-आवेदन प्रणाली को OSes मा "सिले" छन् जस्तो लाग्छ र यसको कामकाज लागि आवश्यक घटक हो। यो त छैन।
साथै, लिनक्स सञ्चालन प्रणाली आधारित कुनै पनि उपकरण जीमेल मार्फत Google दर्ता पुष्टि ई-मेल प्रयोग यसको निपटान अनावश्यक सेवाहरू मा छ। प्रश्न छ: एउटै Google+ खाता म किन दर्ता गर्नुपर्छ मूल उपकरण मानक प्रक्रिया को पुष्टि भएको छ भने?
र तपाईंले Google-नक्सा जस्तै सेवाहरूमा पनि हेर्न भने, यो सजिलो तिनीहरूले आन्तरिक भण्डारणमा कब्जा धेरै ठाउँ कल्पना छ। भूस्थान सोधे, प्रश्न प्रयोग गरेर को आदर मा, तर किनभने uninitiated प्रयोगकर्ताहरूको बहुमत आवश्यक छैन। हटाउँदै सिस्टम आवेदन 4PDA (विशेष वेबसाइट मोबाइल ग्याजेटहरूमा समर्पित) पनि अक्सर एक जरूरी छ जो मूल-अधिकार वा मूल पहुँचको अभाव, मा, धेरै माध्यम उपलब्ध सुझाव दिन्छ। सबैभन्दा सामान्य विकल्प विचार गर्नुहोस्।
सिस्टम आवेदन हटाउँदै "एन्ड्रोइड" -devaysov: सामान्य नियम
तुरुन्त demarcated हटान बुझ्न वा फर्मवेयर आधारित यस्तै कार्यहरू संग मानक कार्यक्रम असक्षम। प्रणाली को फर्मवेयर संग अवस्था धेरै सजिलो, किनभने प्रायजसो, आफ्नो स्थापना जहाँ त्यहाँ एक सुपर व्यवस्थापक खाता छ उच्च प्रयोगकर्ता को analogy द्वारा संग Windows आधारित प्रणाली स्तर, मा हस्तक्षेप आवश्यक पनि छ। सार एउटै हो।
विशेष गरी फर्मवेयर मा, यी प्रतिबन्धहरू circumvent गर्न Android-उपकरणहरूमा स्थापित प्रोग्राम को केही, तर "सफा" सिस्टम सजिलै परिवर्तन बनाउन प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्छ। विकासकर्ता अधिकार प्रदान गर्न ओएस Hack, त्यसैले बोल्न, यो एकदम सरल छ। तर यहाँ सिस्टम आवेदन हटाउन बनाउन छ "एन्ड्रोइड" सच्याउन गाह्रो हुनेछ।
यस्तो एक्सप्लोरर प्रयोग गरेर कार्यक्रम
Neiskushenenomu प्रयोगकर्ताले गुगलमा प्रवेश कुनै प्रभाव (यो सिर्फ त्यहाँ देखा गर्दैन) हुनेछ केही अनुप्रयोगहरू हटाउन प्रयास सेवा प्ले भनेर थाहा गर्न आवश्यक छ। किनभने सबैभन्दा प्रयोगकर्ता यी सबै वस्तुहरू कहाँ छन् थाहा छैन, बैगुनी कार्य पनि - कार्यक्रम फाइलहरू स्वयं मेटाउन। साथै, तिनीहरूलाई थुप्रै लुकेको वा स्थापित कार्यक्रम निर्देशिका भन्दा अन्य स्थानहरूमा डेटा समावेश हुन सक्छ।
यसको सरल फारममा, जड एक्सप्लोरर, वा यसको analogs (Framaroot, टाइटेनियम जगेडा, जड अनुप्रयोग हटानेवाला) प्रयोग गर्नुहोस्।
को "एक्सप्लोरर" वस्तु हालतमा फेला पार्न र मूल-अन्वेषक मेनु मा जा गर्न मा, उच्च प्रयोगकर्ता को पेश्की स्वीकार। त्यसपछि, नयाँ विन्डोमा, जडान आर / डब्ल्यू पुष्टि, र त्यसपछि निर्देशिका अनुप्रयोग, प्रणाली निर्देशिका मा स्थित खोज।
जब आवश्यक APK ढाँचा फाइलहरू फेला हुनेछ, यो केवल आवेदन हटाउन आवश्यक छ, तर सेवा (यो गरिरहेको अघि एक सय पटक सोच्न)। तर यो पर्याप्त छैन। एकै समयमा, एक्सटेन्सन .odex संग नै नाम सबै वस्तुहरू हटाउनुहोस्। मात्र त सिस्टम खाली गर्नेछ। केही शुद्धीकरण को यो विधि रजिस्ट्री प्रविष्टिहरू हटाउँदछ भन्ने विश्वास गर्छन्। लिनक्स आधारित प्रणाली आधारित बनाइएको थियो जो "एन्ड्रोइड", मा, रजिस्टर सबै छैन किनभने हामी, आफूलाई असहमत गर्न अनुमति दिन्छ।
सिस्टम अनुप्रयोग हटानेवाला
अघिल्लो मामला मा, यो पूर्व-स्थापित अनुप्रयोगहरूको हटाउने संग गल्ती गर्न धेरै सजिलो छ। उदाहरणका लागि, हामी थाहा अवस्थामा एकदम नम्बर, को मोड्युल वाइफाइ को "तोडफोड", प्रयोगकर्ताहरूले परिणामस्वरूप संचार बिना रह्यो। त्यसपछि प्रारम्भिक विधानसभा फर्कन यो धेरै गाह्रो (तर सम्भव) छ।
अर्को कुरा - आधिकारिक उपयोगिता प्रणाली अनुप्रयोग हटानेवाला, तपाईं पनि गुगल प्ले मा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो मूल-अधिकार मात्र उपस्थिति आवश्यक छ। तथापि, एउटा अनुप्रयोग फिल्टर सिस्टम घटक, "तपाईं मेट्न सक्नुहुन्छ" जस्तै एक श्रेणी चयन चयन गर्न प्रयोगकर्ता सही दिने, "राम्रो छोड्न", "सुरक्षित छैन हटाउनुहोस्।" साधारण मामला मा सामाजिक सञ्जाल विजेट (फेसबुक, ट्विटर), वा YouTube जस्तै समान सेवाहरू हटाउन सम्बन्धित छ। प्रणाली क्षति राख्न छ।
को "एन्ड्रोइड" हटाउने सिस्टम आवेदन कार्यक्रम यो आफ्नो सम्पर्क सूचीमा सम्बन्धित हुन सक्छ रूपमा, सिफारिस गर्दैन मा दोस्रो संस्करण मा, सन्देश र यति मा भनिएको छ। डी फेरि, सेवा को नाम थाह छैन, यस्तो कुराहरु गरिरहेको लायक छन्, र त्यो वास्तवमा र फोन मोडमा सक्नुहुन्छ हटाउन, र त्यसपछि कलहरू उपलब्ध हुन्छ।
प्रणाली अनुप्रयोगहरू मूल-अधिकार बिना हटाउँदै
अब कन्फिगरेसन परिवर्तन गर्न उपयुक्त पहुँच अधिकार को अभाव बारेमा केही शब्द। को लेनोभो सिस्टम आवेदन, साथै मोबाइल उपकरणहरूको अन्य निर्माताहरु हटाउँदै, तपाईं आफैलाई बनाउन र विशेषाधिकार को एक स्तर मुछिएको बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं आफ्नो कम्प्युटर आफ्नो उपकरण जडान यो गर्न, एक समानान्तर SuperOneClick र Deploater अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस्। होइन काम को सिद्धान्त उल्लेख, यो उल्लेख गर्न सकिन्छ आफ्नो कार्यहरू सिस्टम प्रयोगकर्ता सही विकासकर्ता छ भन्ने विश्वास गर्छन् हुन मात्र छ। स्थापना समयमा, चालक पहिलो स्थापित गर्दै छन्, र त्यसपछि त्यहाँ मुख्य आवेदन एउटा सञ्चालनको छ। यसलाई एन्ड्रोइड 4.0 को संस्करणमा पाइने संवेदनशीलता आधारमा संचालित, त्यसैले एन्टिभाइरस सफ्टवेयर बाह्य छेडछाड को एक लक्षण रूपमा बुझ्ने गर्न सक्नुहुन्छ। निष्कर्ष: वास्तविक-समय स्क्यानर, तपाईं अक्षम गर्न आवश्यक छ। तर कार्यक्रम सबै विस्तार .apk संग अनावश्यक चयन वस्तुहरु हटाउँदछ र स्वचालित रूपमा .odex।
म यसलाई के गर्नुपर्छ?
सिस्टम आवेदन "एन्ड्रोइड" हटाउँदै स्वीकार्य देखिन्छ। तर केही सेवाहरू मास्क गर्न सकिन्छ कि भूल छैन, र आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम केहि छैन भन्न हुनेछ। विशेष, यो कि उपसर्ग com.android वा com.google सुरु वस्तुहरू लागू हुन्छ। तपाईं मात्र सबै नतिजा पूर्ण समझ वस्तु जस्तै सेवाहरू हटाउन विशेष गरी होसियार हुनु आवश्यक छ जहाँ यो छ।
विन्डोज 10: कसरी अनावश्यक घटक, सेवा र प्रक्रियाहरू बन्द गरेर CPU प्रयोग कम गर्न
कसरी Windows7काम गति गर्न
पाठ कागजातहरू पृष्ठ नम्बर
सेटअप - यो के हो? को Setup.exe कार्यक्रम के हो?
कालो-र-सेतो तस्वीर। फोटो सम्पादक। कसरी एउटा फोटो कालो-र-सेतो बनाउन
को सीएससी प्रयोग गरेर नेटवर्क मा आय
सजावटी प्लास्टर। भेनिस प्लास्टर: आवेदन प्रविधी
राजनीतिक विज्ञान र यसको विधि को प्रकार्य।
जीवित र मृत पानी। औषधीय गुण
सबैभन्दा विश्वसनीय कार के हुन्?
मुक्तिको भयानक रोगहरु बाट - डीपीटी र पोलियो खोप को खोप
तपाईं आफ्नो कागति स्वभाव बारे के भन्न सक्छौं
उत्पादन "ल्याण्ड रोवर": टेलीफोन। समीक्षा, मोडेल विनिर्देशों
दुनिया मा driest मरुभूमि: एक फोटो र विवरण